eNasha.com - विज्ञापनको तरिका त यो पो !
बुढेशकालमा आफैँलाई रोमाञ्चक पार्ने फूर्ति आयो भने तपाइँ के गर्नु हुन्छ ? आफ्ना नजिकका साथीभाइसँग भेटेर आफ्नो खुशी बाँढ्नु हुँदो हो । त्यतिले पनि पुगेन भने चोकमा उभिएर आफ्नो फूर्तिलोपनको 'राज' अरुलाई बताउनु हुँदो हो । र, त्यतिले पनि पुगेन भने चाहिँ नि !
यहाँभन्दा बढ्ता सोच्न सक्नु भएन भने लौ सुन्नुस् र मंगलबार अक्टोबर ३० अर्थात् १३ कात्तिकको कान्तिपुरको पाँचौँ पृष्ठ पल्टाउनुहोस् । त्यसपछि तपाइँले चाल पाउनु हुनेछ ।
कान्तिपुरमा १३ गते छापिएको विज्ञापन अनुसार एक हजुर बा निकै स्वस्थ हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ विविध ११ किसिमका काम नियमित रुपमा, नबिराई गर्नुहुन्छ । त्यसो गर्दाको फाइदा के छ भने उहाँ ७३ वर्षको उमेरमा पनि हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ । यो उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेर होइन, विज्ञापन पढेर थाहा पाएको हो ।
त्यसो त यी स्वस्थ हट्टाकट्टा बा हुलाक टिकट र पुराना मुद्राका सङ्कलकलाई हामीले प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर उहाँले यसरी विज्ञापन गराउनुको मूल कारण जान्न चाह्यौँ । तर उहाँ स्वस्थ हुनुभएकाले घरमा भेटिनु भएन । (राति भेटिनु हुन्थ्यो होला, तर अफिस नै छुट्टि भएपछि सम्पर्कको जाँगर सेलायो ।) त्यसैले विज्ञापन गराउनुको असली कारण चाहिँ आफ्नो विज्ञापन गराउनु हो वा स्वस्थ रही स्वस्थ रहने कामना हो वा उहाँसँग सङ्कलित हुलाक टिकट र पुराना मुद्रा बेच्नु मूल ध्येय हो, त्यो खुल्न सकेन । साथमा के पनि बुझ्न बाँकी रह्यो भने यो बुढेशकालको 'फ्रस्ट्रेशन' त होइन !
खैर जेसुकै होस्, आखिर नेपाली अखबारले अखबारी इतिहासमा विज्ञापनको यो नौलो शैली चाहिँ पाएको पक्कै हो ! विज्ञापक हजुर बाले कीर्तिमानका लागि नेपालकै बुक अफ रेकर्डका लागि दाबी पनि गर्ने हो कि !
अनुभव माओवादी संविधानसभा हल्ला awards समलिङगी सेलेब्रिटी मोबाईल पेट्रोल crisis hi-life streets festival events celebrity